नयाँ आर्थिक वर्ष देखी नयाँ नियम्, तपाईले कति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ ? – Narayani Dainik
नयाँ आर्थिक वर्ष देखी नयाँ नियम्, तपाईले कति कमाउँदा राज्यलाई कति कर तिर्नुपर्छ ?
व्यवसाय, रोजगारी वा कुनै आयआर्जन गरेपछि राज्यका हरेक नागरिकले सरकारलाई कुनै न कुनै रूपमा कर बुझाउनैपर्छ। जानाजान वा अन्जानमा तपाईंले कर नबुझाए सरकारी कारबाही तथा जरिवानामा पर्न सक्नुहुन्छ।
प्यान अनिवार्य: सरकारले साउनदेखि कुनैपनि कम्पनी तथा फार्म तथा निकायले स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) बिना तलब दिन रोक लगाउने भएको छ। तलब दिँदा प्यान नभएका कर्मचारीलाई खर्च कट्टी गर्न नपाउने आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। कुनै पनि कम्पनी तथा फार्मले साउनदेखि सबै कर्मचारीलाई बैंक खातामार्फत तलब भुक्तानी गर्नुपर्छ। त्यसमा प्यान नम्बर उल्लेख हुनुपर्छ।
faceapp प्रयोग गर्नु हुन्छ भने विचार गर्नु होस् -सुरक्षित छैन १० कराेडभन्दा बढीकाे फाेटाे र नाम !